Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » WHO: Ixesha legunya lokugonya laseYurophu ngoku
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ekuqaleni kukaNovemba, i-WHO yalumkisa ukuba iYurophu "yeyona ndawo iphambili" yobhubhani we-COVID-19.
Ngokutsho komntu omdala I-World Health Organization (WHO) Ngokusemthethweni, iYurophu kufuneka ithathele ingqalelo ngokungqongqo ukwenza ugonyo olusisinyanzelo ngokuchasene ne-coronavirus, ekukhanyeni ukuvela kwakhona kwe-COVID-19 kwilizwekazi.
Umlawuli olawulayo we-WHO eYurophu, uRobb Butler, uthe “lixesha lokuba sibe nencoko kumntu ngamnye nakwimbono esekwe kubemi. Yingxoxo ephilileyo ukuba nayo.”
U-Butler wongeze, nangona kunjalo, ukuba "imiyalelo ize ngeendleko zokuthembela, ukubandakanywa kwentlalo" kwixesha elidlulileyo.
Ekuqaleni kukaNovemba, i WHO ilumkise ukuba iYurophu "yayiyeyona ndawo iphambili" yobhubhani we-COVID-19, ngelixa ekuqaleni kwale veki, abasemagunyeni kwezempilo behlabathi bathi ilizwekazi lithatha i-60% yosulelo lwe-COVID-19 kunye nokufa kwiveki ephelileyo. I WHO Ikholelwa ukuba inani lokufa kobhubhane eYurophu linokufikelela kwizigidi ezi-2 ngoMatshi ka-2022, ukuba ukusasazeka kwale ntsholongwane kuyaqhubeka kungajongwa.
Noko ke, owayesakuba ngumalathisi weSebe Lezempilo Loomama, Abantwana Nabafikisayo le-WHO, uAnthony Costello, wacebisa oorhulumente ukuba banyathele ngenyameko ekwenzeni ugonyo olusisinyanzelo ngenxa yoloyiko “lokugxotha abantu abaninzi abangamthembiyo urhulumente namayeza okugonya.” Endaweni yezigunyaziso kunye nokuvalwa okutshixwayo, wakhuthaza amanyathelo afana nokunxiba imaski kunye nokusebenza ekhaya.
KwiYurophu iphela, ziipesenti ezingama-57 kuphela zabantu abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19, ngokwezibalo ezibonelelwe lilizwe lethu kwiwebhusayithi yeDatha.
NgoLwesihlanu ophelileyo, i Ingqonyela yaseOstriya, uAlexander Schallenberg, ugonyo olubhengeziweyo luya kuba sisinyanzelo kubo bonke abahlali, bathintele abo banelungelo lokuxolelwa kunyango ukususela ngoFebruwari 1, 2022. Abo bala ukudutyulwa banokulindela isohlwayo esikhulu, ngokweengxelo zeendaba. Nangona kunjalo, akukabikho sigqibo malunga nobudala obuchanekileyo apho abantu base-Austrian baya kufuneka ukuba bafumane i-inoculated. Ostriya lilizwe lokuqala eYurophu ukunyanzelisa izigunyaziso, uninzi lwezinye izizwe kwilizwekazi ukuza kuthi ga ngoku zenza ugonyo olusisinyanzelo kubasebenzi abathile kuphela, kunye nokhathalelo lwezempilo kunye nabasebenzi bakarhulumente baba ngabokuqala emgceni.
Nangona kunjalo, kukho iqaqobana lamazwe kwihlabathi liphela agunyazise ukuba i-COVID-19 inoculation kubo bonke abemi bawo. I-Indonesia yathabatha eli nyathelo ngoFebruwari, yaye iMicronesia neTurkmenistan zalandela ehlotyeni.
26 Nov. 2021 – Vaksinefacismen og Bill Gates – Profetiske Artikler uthi:
Novemba 26, 2021 kwi-17: 50
[…] «Ndifunde u-tjenestemann ophezulu e-Verdens helseorganisasjon (WHO) kwi-Europa seriøst vurdere kunye ne-veta obligatorisk vaksinasjon mot koronavirus, ndikwi-COVID-19-gjenoppblomstringen kwi-kontinentet.» UKan uyamkhulula […]